Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
Whipwormကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင် Trichuris trichiura လို့လည်း ခေါ်တဲ့ လူတွေရဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာနေတဲ့ ကပ်ပါးကောင် ဖြစ်ပါ
တယ်။ဥတွေနဲ့ အကောင်ကြီး သန်ကောင်တွေဟာ လူတွေရဲ့ အူထဲမှာနေပြီးတော့ အူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင်လို့ခေါ်တာကတော့ ကြာပွတ်နဲ့ပုံစံတူတဲ့ သန်ကောင်တွေနဲ့တူလို့ပါ။ ကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင် ပိုးဝင်ခြင်း ဒါမှမ
ဟုတ် trichuriasisလို့ ခေါ်တဲ့သန်ကောင်ထိုးခြင်းဟာ အူမကြီးမှာ ကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင် ကပ်ပါးကောင်များ ဝင်နေခြင်းကိုခေါ်ပါ
တယ်။ သန်ကောင်ထိုးခြင်းခံရတဲ့ လူတွေမျာ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊
ပျို့အန်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သန်ကောင်ထိုးခြင်းဟာ သန်ကောင် ကပ်ပါးပိုးတွေပါဝင်တဲ့ ဝမ်းတွေကို ကိုင်တွယ်မိရာကနေ ပြန့်နှံ့ကူးစက်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အများစု
ဖြစ်ကြပြီး အထူးသခြင့် ရာသီဥတုပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ နေရာ နဲ့ သန့်ရှင်း
မှု မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ သန်ကောင်ထိုးခြင်းကို အများဆုံး ကုသမှုပေးတာကတော့ ကပ်ပါးကောင်သေစေတဲ့ဆေး
တိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုတစ်ခါ ခံယူလိုက်တာနဲ့ လူတော်
Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခန့်မှန်းခြေ ၆၀၄-၇၉၅သန်းလောက်ရှိတဲ့ လူတွေဟာ ကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင် ကူးစက်ခြင်းခံနေရပါတယ်။ ဒီရောဂါကို
ကျေးလက်နေရာဒေသတွေမှာ အတွေ့ရဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်
လည်း အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းနဲ့ စီမံဆောင်
(အခြားအချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။)
Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သန်ကောင်ထိုးခြင်းကြောင့် လက္ခဏာတွေအများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် သိပ်မပြင်းထန်တာကနေ ပြင်းထန်တဲ့အထိ လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်
-ဝမ်းမထိန်းနိုင်ပဲထွက်ကျခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းကိုထိန်းနိုင်စွမ်းမရှိ
နဲ့ အခြားသော ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ဆုံး ပြောပြပါ။
Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Trichuris trichiuraလို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တစ်မျိုးကြောင့်
Trichuriasisလို့ခေါ်တဲ့ သန်ကောင်ထိုးခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။၎င်း
ကပ်ပါးကောင်ကို ကြာပွတ်ပုံစံရှိတဲ့အတွက် ကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင်
လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ဒီအကောင်ဟာ တစ်ဖက်စွန်းမှာတော့ ကြာပွတ်ရဲ့ လက်ကိုင်ပုံစံခပ်ထူထူလေးရှိနေပြီး နောက်တစ်ဖက်က
တော့ကြာပွတ်လို ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းသေးသေး ရှိပါတယ်။ လူတွေက
ဒီကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင်ကို သူတို့ရဲ့ဥတွေ ကပ်ပါးကောင်တွေ ပါဝင်နေတဲ့ဝမ်းတွေ ရေတွေ ဖုန်မှုန့်တွေကို ထိတွေ့တာကနေ ကူးစက်ခံကြရပါတယ်။ ကြာပွတ်ပုံစံသန်ကောင်ရဲ့ဥတွေဟာ မသန့်
ရှင်းတဲ့ဝမ်းတွေကို မြေသြဇာအဖြစ်သုံးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကူးစက်ခံ
ထားရတဲ့ သူရဲ့ဝမ်းတွေကို မြေကြီးပေါ်ကျစေခြင်း ဒါမှမဟုတ် တိရစ္ဆာန်တွေက အပြင်မှာ ဝမ်းသွားလို့သော်လည်းကောင်း မြေကြီး
ပေါ်ရောက်စေပြီး ကူးစက်ခံရပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖုန်မှုန့်တွေကို ထိပြီး အဲ့ဒီလက်ကို သူတို့ပါးစပ်နားထားမိခြင်း သေချာမဆေး မချက် မခွာ ထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီး တွေကို စားမိခြင်းနဲ့ ဒီကပ်ပါးကောင်ရဲ့ဥတွေ အကောင်တွေကို မျိုချမိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကောင်တွေဟာ အူသိမ်ထဲကိုရောက်တာနဲ့ ဥ
တွေကိုဥချပြီး အကောင်ပေါက်လေးတွေကို ထွက်လာစေပါတယ်။
အကောင်ပေါက်လေးတွေ ကြီးထွားလာချိန်မှာ ကြီးပြီးသား အကောင်တွေဟာ အူမကြီးထဲမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ သန်ကောင်အမဟာ နှစ်လကြာပြီးနောက်မှာ ဥတွေ
ပြန်စ ဥ တတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်မှာပြောပြမယ့် အဖြစ်များတဲ့အချက်တွေက သန်ကောင်ထိုးခြင်းကို ပိုဖြစ်စေတယ်
-ပူနွေး စိုစွတ်တဲ့ရာသီဥတု မှာနေထိုင်ခြင်း
-တိရစ္ဆာန်ရဲ့ ဝမ်းတွေပါဝင်တဲ့မြေကြီးရှိတဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှာ အလုပ်လုပ်ခြင်း။
-တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဝမ်းကို မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြ ုပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ မြေက ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အစိမ်းစားခြင်း
-ကလေးတွေက သန်ကောင်ထိုးခြင်း ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများပါ
တယ်။ သူတို့တွေက အပြင်ဘက်မှာဆော့ကြတာများပြီး အစား
မစားခင်မှာလည်း လက်ကိုသေချာစွာ မဆေးကြလို့အဖြစ်များတာပါ
Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တကယ်လို့သင့်မှာ သန်ကောင်ထိုးခြင်းဖြစ်နေတယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က သံသယရှိပါက သင့်ကို ဝမ်းစစ်ဖို့ အကြံပေးပါလိမ့်
မယ်။ သင်က သင့်ရဲ့ ဝမ်းနမူနာကို ဓါတ်ခွဲခန်းကိုပေးပို့ပြီး စစ်ရမှာပါ။
ဝမ်းအဖြေက သင့်အူလမ်းကြောင်းနဲ့ ဝမ်းတွေထဲမှာ ကြာပွတ်သန်ကောင်ရဲ့ ဥတွေလား အကောင်တွေလားဆိုတာကို ခွဲ
ခြားပေးနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုစစ်ဆေးနည်းဟာ နာကျင်တာ သက်တောင့်သက်သာမရှိတာတွေကို မဖြစ်စေပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန်
က သင့်ကိုပိုးသတ်ထားတဲ့ ခွက်နဲ့ ပလတ်စတစ်အထုပ ်နောက်ပြီး အထူးပြ ုလုပ်ထားတဲ့အိမ်သာသုံးတစ်ရှူး
ကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ ပလတ်စတစ်ထုပ်ကို အိမ်သာကာဗာပေါ်မှာ တင်လိုက်ပါ အိပ်သာထိုင်တဲ့နေရာမှာ သေချာတင်နေရဲ့လား ဆို
တာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်ဝမ်းသွားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အထူးပြုလုပ်
ထားတဲ့တစ်ရှုးကိုသုံးပြီး ပိုးသတ်ထားတဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်ပါ။ မွေးကင်း
စကလေးတွေအတွက်ကတော့ သေးခံဒိုင်ပါကို ပလတ်စတစ်စနဲ့ ပတ်ပတ်လည် ကာပြီး နမူနာကိုရယူပါ။ ဒီစစ်ဆေးမှုလုပ်အပြီးမှာ လက်ကို စင်ကြယ်စွာသေချာပြောင်အောင်ဆေးပါ။ နောက်ဆုံးမှာ
ဒီနမူနာကို ဓါတ်ခွဲခန်းကိုပို့ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါမှ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကိုသုံးပြီး ကြာပွတ်သန်ကောင်တွေများပါ
လား ဒါမှမဟုတ် ဥတွေလားဆိုတာကို ခွဲခြားပါလိမ့်မယ်။
Trichuriasis (သန်ကောင်ထိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသုံးအများဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးကုသမှုကတော့ albendazole, mebendazoleလို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်သေစေတဲ့ ဆေးတွေ
တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါထဲက ကြာပွတ်သန်ကောင်တွေနဲ့ဥတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေး
ကိုတစ်ရက်ကနေ သုံးရက်အထိသောက်ဖို့လိုပါမယ်။ ဘေးထွက်ဆိုး
ကျိုးကတော့ တော်တော်နည်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ
သက်သာတာနဲ့ သင့်ဆရာဝန်က ပိုးဝင်ခြင်း ပျောက်မပျောက်သိစေဖို့ နောက်ထပ်ဝမ်းစစ်ခြင်းကို ပြ ုလုပ်ပါလိမ့်
သန်ကောင်ထိုးခြင်းကို လျှော့ချနိုင်မယ့်အန္တရာယ်ရှိအချက်တွေကို လျှော့နိုင်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ကာကွယ်နိုင်
-လက်ကိုသေချာစွာဆေးကြောခြင်း အထူးသဖြင့် အစားအသောက်တွေမကိုင်ခင်ပေါ့
-အစားအသောက်တွေကို မစားခင် သေချာစွာဆေးခြင်း၊အခွံခွာခြင်း ၊ချက်ပြ ုတ်ခြင်း။
-ကလေးတွေကို မြေကြီးတွေမစားဖို့သင်ခြင်းနှင့် အပြင်မှာဆော့ပြီး
-ပိုးရှိနေမယ်ထင်တဲ့ ရေကို ကျိ ုချက်သောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သောက်ရေသန့်သာသောက်ခြင်း
-တိရစ္ဆာန် ဝမ်းများကျုံးရာ ထိတွေ့ရာတွင် သတိထားကိုင်တွယ်ခြင်း
-တိရစ္ဆာန် မွေးမြ ူရေးပြ ုလုပ်ရာမှာ ခြံခတ်ပြီးကန့်သတ်ထားခြင်း။
ပုံမှန် ဒီခြံတွေကို သန့်ရှင်းရေးပြ ုလုပ်ပေးခြင်း
-ခွေးတွေကြောင်တွေ ပုံမှန် ဝမ်းသွားတတ်တဲ့ နေရာက မြက်တွေကို ခပ်တိုတိုဖြစ်အောင်အမြဲနှုတ်ပေးခြင်း
Trichuriasis.https://www.cdc.gov/parasites/whipworm/gen_info/faqs.html.Accessed December 13, 2016.
Trichuriasis.http://www.healthline.com/health/whipworm-infection#Prevention8. Accessed December 13, 2016.
Trichuriasis.https://en.wikipedia.org/wiki/Trichuriasis. Accessed December 13, 2016.